व्यङ्ग्य – धारा, बादल र बाको दलको गञ्जागोलले तिरीमिरी झ्याइँ ! – News Of Nepal
व्यङ्ग्य – धारा, बादल र बाको दलको गञ्जागोलले तिरीमिरी झ्याइँ !
जुन धाराबाट निस्के पनि बा र बाको दल । समर्थन गर्ने पनि बाको दल, विरोध गर्ने पनि बाको दल । थरीथरीका धारा, उपधारा, बा, बादल अनि बाको दलका कुरा एकैपटक दिमागमा घुसेपछि तपाईँलाई तिरीमिरी झ्याइँ बनाएन? उज्यालोअनलाइनबाट